पूर्वएमालेलाई दाहालको प्रश्न: मदन भण्डारीलाई दोहोर्याईरहने कि अघि बढ्ने? - JagaranPost
Home/राजनीति/पूर्वएमालेलाई दाहालको प्रश्न: मदन भण्डारीलाई दोहोर्याईरहने कि अघि बढ्ने?
काठमाडौँ: मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २६ औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जबजलाई दोहोर्‍याइरहने कि अघि पनि बढ्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पार्टी एकताको एक वर्ष पुगेकै दिन दाहालले आफ्नो पोजिसन लिएका हुन्।
पार्टीभित्र वैचारिक संघर्ष चुलिएकै दिन उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केहीले अझै पुष्पलाल श्रेष्ठकै विचार बोकेर हिँडेको तर्क गरे।
उनले ठिक त्यस्तै नेकपाका केही नेताले पनि मदनलेझै कार्ल मार्क्सको विचारलाई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ विचारको रुपमा अघि बढाउनुको सट्टा पुरानै कुरा दोहोर्‍याइरहेको तर्क गरे। उनले मार्क्सवाद डग्मा, प्राग्मा, कुरान, बाइबलको रूपमा नभइ विज्ञानको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आँखा नदेख्ने भएर पार्टी एकता नगरेको तत्कालीन कार्यनीति जनताको जनवाद र दीर्घकालीन लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताउँदै समाजवादको नयाँ मोडल स्थापित गर्ने दृढता व्यक्त गरे।
अन्तत: एक भए संघिय समाजबादी फोरम र नयाँशक्ति